Ndeapi akanakisa Ekushambadzira Mapuratifomu? | Martech Zone
China, December 18, 2014 China, December 18, 2014 Douglas Karr
Ndokumbirawo umbomira kubvunza izvi. Ndinorevesa. Hapana yakanakisisa. Nguva.
Uyu mubvunzo wandinobvunzwa wadzokororwazve nevashambadzi pamwe nevashandi vemaindasitiri zvakafanana. Ndiwo mubvunzo usingagone kupindurwa kunze kwekunge paine ongororo izere yekambani iri kuzoshandisa chikuva.
Sezvo a kutsvaga mutengesi wemakambani ekushambadzira, taita kushingairira kwakakodzera kwemafemu ekudyara, takabvunzana nemakambani ezvekushambadzira, uye takabvunzana nemakambani mazhinji pakuongororwa kwemapuratifomu ekutenga.
Mumwe anogona kufunga kuti zviri nyore sekuisa pamwechete rondedzero uyezve kungo tarisa mabhokisi mu gridhi kune mumwe nemumwe mutengesi, uye kuona bhajeti inodiwa kune yega rezinesi. Preposterous. Izvo zvakafanana nekuongorora mabhurugwa nekuona kuti vane 2 pant makumbo, bhandi zvishwe, homwe, uye zipi - uye nekuona kuti zvakadhura zvakadii. Mibvunzo isina kupindurwa ndeyekuti ibhurugwa rinofanirwa kuve rerudzii, kwarinenge richipfekwa, kunyangwe vachida kucheneswa nekuayinwa, kuti vachapfekwa kangani, vanofanirwa here kuenzanisa zvimwe zvidimbu zvehembe.
Nyaya iripo ndeye email kushambadzira. Isu tinoziva toni yemakosi akasiyana eemail ekutengesa. Zvimwe zvinodhura asi zvinopa tani yemasevhisi ekubata ruoko mishandirapamwe. Vamwe vanotanga mahara uye vanobatana nemamwe mapuratifomu echitatu. Vamwe vane maAPI akasimba ayo anogona kubatanidzwa nezvivakwa zvekuvandudza. Vamwe vane makuru maimeri ekubuda kutumira mamirioni emaema pasekondi. Vamwe vane zviuru zvematemplate ekusarudza kubva.
Izvo zvakakosha kuti uongorore zviwanikwa zvekambani, kusanzwisisika kwemushandisi, iyo nguva inodiwa yekushandisa kuona kuti zano racho raiswa nemazvo uye raitwa, bhajeti rezinesi, kubatanidza, kuita uye kushandiswa, uye pakupedzisira kudzoka kwekudyara kwe chikuva. Isu hatiite kurudziro imwechete kubva kune mumwe mutengi kuenda kune inotevera nepuratifomu yega yega - kunyangwe patine hukama hwakabatana nemutengesi.
Kuva mutengesi agnostic kwakakosha kune wako agency kana wekutsvagisa mupi kuitira kuti ugone kuwedzera kudzoka kwekudyara papuratifomu kutenga uye zano.
Izvi hazvireve kuti hapana mapuratifomu atinokurudzira kupfuura vamwe. Pane zvemukati manejimendi kumberi, semuenzaniso, tinokurudzira WordPress zvakanyanya kupfuura mamwe mapuratifomu. Haisi iyo WordPress yemahara - haisiri iyo kana iwe ukawedzera dhizaini, kusimudzira, kugadzirisa uye kugadzira zvemukati mune inobudirira kuitisa. Asi WordPress inowanzo rova ​​mamwe mapuratifomu nekuda kwekuti kusarudzwa kukuru kwemapulagini, kubatanidzwa, rutsigiro rwechitatu-bato, kugadzirisa mhinduro, uye kusarudzwa kwetimu dzakagadzirwa kare. Panogona kuve, zvechokwadi, kuvepo zviri nani zvemukati manejimendi masystem ekureruka kwekushandisa, optimization, chengetedzo, nezvimwe… asi kuchinjika uye kuwanikwa kwezve zviwanikwa zvichiri zvinogona kupfuura-kukwira sarudzo yekukurudzira chikuva.
Ini ndanga ndichitaura nezve maturusi pachiitiko svondo rino ku Smartups muIndy uye ini ndakabatana Kevin Mullett uye Julie Perry. Kevin akauyawo nechidimbu chiri nyore asi chinonakidza kuraira…
Kana uchizvifarira. Uchaishandisa.
Dzimwe nguva hazvisi kunyange mabhero ese uye muridzo kana mutengo, dzimwe nguva zvinongova kuti iwe unoda mushandisi interface uye unakirwe uchishandisa chishandiso. Kana iwe uchinakidzwa nekushandisa chikuva, mikana ndeyekuti iwe uzviise iko kushandisa!
Ndezvipi zvakanakisa? Izvo zvese zvinoenderana!
Tags: mapuratifomu akanakisa ekushambadzirachikuva chakanakisaakanakisa matekinoroji
elektronik sigara musika
Ndira 3, 2015 na4: 40 PM
Ndinokutendai neruzivo uye nekunyora….